Prof Hawking , naafo mise noole hawl-kar ahaa? - BBC News Somali
Wuxuu ahaa qofka ugu caansan dunida ee curyaan ah, balse wuxuu beeniyay fikrad kasta oo laga qabay in dadka naafada ah aysan waxbo qabsan karin.
Wuxuu gaaray heerkii ugu sareeyay oo qof casrigan nool uu ka gaari lahaa cilmiga seeyniska, isaga oo soo hindisay fikradda cuf-is-jiidadka hawada sare ee loo yaqaano Black Holes, islamarkaasna qorey buugaag badan oo cilmi seeyniska ah.
Markii uu 22 jir ahaa ayaa laga heley xanuunka ku dhaca neerfaha maskaxda iyo xangulaha, waxaana loo sheegay in uu geeriyoon doono muddo 2 sano gudahood ah, balse marnaba ma uusan rajo dhigin, shaqadiina waa uu sii labo jibaaray.
Xanuunka ayaa waxa uu Stephen Hawking, oo shalay geeriyooday, ku kalifay in uu ku uruuro gaariga curyaamada, isaga oo xitaa lumiyay codkiisa, wuxuuna dadka kula xiriiri jiray qalab codka soo saara.
"Waxaan u maleynayaa in uu qabtay wax ka badan intii ay dadka qaban jireen, wuxuu tusaale cad u ahaa in aysan jirin xudduud reebi karta bini'aadamka" ayuu yiri Prof Paul Shellard oo ka mid ahaa ardaydii uu wax u dhigay Hawking.
Dad aad u badan ayuu tusaale wanaagsan u noqday Hawking, isaga oo lagu sharfay abaalmarino badan adduunka, wuxuuna xitaa mar furay ciyaaraha dadka laxaadka la' ee olombikada ee London ka dhacay.
Mid ka mid ah waxyaabaha waaweyn ee u taray dadka naafada ah ayaa ahayd in uu ahaa nin bulshada ka dhex muuqday isaga oo curyaan ah, taasna waxa ay badashay fikraddii ay dadka ka qabeen naafonimada.
Waxaa kale oo uu inyar kasoo muuqday filimaan dhawr ah oo laga jilley oo uu ku jiro filimka ku guuleystay abaalmarinta Oscars ee The Theory of Everything.
Sheeybaarkiisa waxa uu ahaa maskaxdiisa, wuxuuna qalab ahaan u isticmaali jiray xisaabta.
Dadka naafada ah ayaa tiro labo jeer ah ka badan in aysan shaqo heli waayaan marka la barbardhigo kuwa lixaadkooda leh.
Talada kaliya ee uu u hayay dadka naafada ah ayaa ahayd in ay xoogga saaraan waxa ay qaban karaan, oo aysan ku mashquulin waxa aysan qaban karin jir ahaan.